कोरोना भाईरस पछीको अर्थतन्त्र भयाभय छ : मदन खनाल | Shirish News
खाद्यान्न र अत्यावश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द छ। नेपाल भित्रने र बाहिरिने सबै नाका बन्द छन्। कतिपयले अब भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर शिरीष न्यूज़ले मेडिकल ब्याबसायी तथा सुधा मेडिकल एण्ड डाइगोनिस्टिकका संचालक मदन खनालसँग कुराकानी गरेको थियो। कुराकानीको संपादित अंशः
कोरोनाको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा फैलन लागेको करिब ३ महिना भयो। सुरुको एक महिना चीनमा मात्र फैलिएको यो भाइरस पछिजापान, कोरिया र फिलिपिन्समा देखिएको थियो। पहिलो महिनामा हामीले पर्यटन क्षेत्रमा क्षति हुन्छ, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोमहत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं। फेव्रुअरीको १५ तारिखसम्म आइपुग्दा यो रोग युरोपभरी फैलियो र मृत्युकोसंख्या चीनभन्दा पनि बढी युरोपमा पुग्यो।
चीन विश्वको औद्योगिक केन्द्र र विश्वभरका उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ स्पेयर पार्ट, मेसिनरी औजारहरु उत्पादन गरेर सप्लाइ गर्ने देशहो। चीनबाट हुने आपूर्ति ठप्प हुँदा विश्वभरी नै आपूर्तिमा समस्या भयो। त्यसको असर संसारभरका उद्योगहरुमा परेको छ भने नेपालकाउद्योगमा पनि यसको असर पर्यो।
यदि कोरोना भाइरसको प्रभाव असारसम्म रह्यो भने नेपालमा भएका सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगहरु बन्द हुन्छन्। त्यस्तै तेलको खपतसबैभन्दा बढी चीनमा हुने गरेको छ तर त्यहाँ तेलको उपभोग कम भयो। जसका कारण तेलको मूल्यमा ह्वात्तै गिरावट आयो। तेलको मूल्यघटेका कारण विश्वको पुँजी बजारमा तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको बजार मूल्य पनि घट्यो। सन् १९८७ पछि विश्वमा सवैभन्दा ठूलोआर्थिक समस्या अहिले आएको हो।
कोरोनाको कारण नेपालको पर्यटन र उद्योगमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। उद्योगी र पर्यटन व्यवसायीले लिएको कर्जा तत्काल उठ्नसक्ने अवस्था रहँदैन। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या हुन्छ। बैंकहरुले कर्जा उठाउन सकेनन् भने उनीहरुकोनाफामा असर पर्नुका साथै बजारमा तरलताको अभाव पनि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र विकसित नभएको हुँदा कोरोनाको असर कृषि क्षेत्रमा खासै पर्दैन। कृषिमा प्रयोग हुने सबै कुरा नेपालमा नै छ।रासायनिक मल नपाउँदा मात्र कृषि उत्पादनको परिणाम ठूलो मात्रामा घट्दैन। आन्तरिक सेवा बजार पनि घट्दैन। यसरी हेर्दा आर्थिकवृद्धिमा पनि ठूलो असर गर्दैन। तर पनि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य त पुग्दैन।
कोरोना र नेपालको विभिन्न आन्तरिक समस्याका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धर ४ प्रतिशत नाघ्याे भनेपनिहामीलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ। कोरोना विश्वव्यापी रुपमा झन् फैलँदै गएर असारसम्म पनि नियन्त्रण हुन सकेन भने आगामी आर्थिकबर्षमा पनि पर्यटन, उद्योग र बैंकहरुलाई नै असर गर्दछ।
अहिले सूचनाको पहुँचको साथै व्यापक रुपमा जनतामा चेतना फैलाएको हुनाले सम्भवतः यो भाइरस चाँडै नै नियन्त्रणमा आउला।कोरोनाको कारण आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिमा चालु आर्थिक वर्षको जति नै असर गर्दछ। यदि कोरोनाको त्रास लम्बियो भनेआर्थिक वृद्धिको दर १५ औं योजनाले आशा गरेअनुरुप हुँदैन। जसले गर्दा सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशिल देशको रुपमा पुग्नअसम्भव छ।
नेपालमा अहिलेसम्म आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या आएको छैन। नेपालको ८० प्रतिशत व्यापार भारत र चीनसँग हुन्छ। चीन कोरोनाकोसंक्रमणबाट उठिसकेको र नाकाबाट आफ्ना सामानहरु लैजाऊ भनेर नेपाल सरकारलाई भनिसकेको छ। भारतीय भन्सार विन्दु बस्तुओसार पसारको लागि बन्द छैन। जसका कारण नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउँदैन।
नेपालको सन्दर्भमा आपूर्तिमा कठिन भएर भोकमरीको अवस्था आउला भन्ने लाग्दैन। हामीलाई हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले पनि धान्छ।हामीले हामीसँग भएको भन्दा राम्रो र गुणस्तरीय सामग्री खोजेका कारण मात्र नेपालले खाद्यान्न आयात गरेको हो। कुल आयातको करिव१० प्रतिशत मात्र हामीले खाद्यान्न आयात गर्दछौं। आयात नगर्दैमा हामी भोकमरीमा पर्छौ भन्ने गलत तर्क हो।
हामीलाई पुग्ने पौष्टिक तत्व र आहारा नेपालमा नै उत्पादन भएको छ। भोकमरी लाग्छ भन्नु नागरिकलाई आतंकित बनाउने कुरा मात्र हो।म तपाईंलाई प्रष्ट्याउन चाहन्छु– कोरोना भाइरसको प्रकोपको असर कृषि क्षेत्रमा भने पर्दैन। खाद्यान्न बाहेकका बस्तुहरु भारतबाटआपूर्ति हुन सकेन भनेपनि चीनमा नियन्त्रणमा आइसकेको हुनाले उताबाट पनि आयात गर्न सक्छौं। नेपालको दुवै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्धछ। दुवैबाट हामीले सहयोग लिन सक्छौं।
निजी क्षेत्रलाई कर तिर्ने म्याद र ऋण पुनर्तालिकीकरण मात्र गरिदिए पुग्छ। व्यवसायीहरुले सरकारले दिइहाल्छ की भनेर माग गरेकोहुनसक्छ। अहिले राहतको प्याकेज सबै उद्योगी व्यवसायीले मागेको भन्ने होइन। जसको सूचनामा पहुँच छ उनीहरुले मागेका हुन्। कुनैएक व्यापारीले राहतको प्याकेज घोषणाको लागि आग्रह गर्दैमा संगठित रुपमा राहतको माग गरिएको हो भन्न मिल्दैन।
यदि कुनै उद्योगीले मलाई घाटा लाग्यो राहत देऊ भन्नुको अर्थ आम नागरिकबाट मलाई पैसा उठाएर देऊ भनेको हो। राज्यको आफ्नै स्रोतत हुँदैन उसको पनि स्रोत भनेको जनताको कर नै हो। कुन हदसम्म नागरिकको सहयोग दिने र कुन विभिन्न देशले उद्योगलाई नभएरउद्योगधन्दा बन्द हुँदा उत्पन्न वेरोजगार मानिसहरुलाई राहतको प्याकेज घोषणा गरेको हो। नेपालमा पनि ज्यालादारीको हकमा भने राहतदिनुपर्छ। त्यसमा उद्योगी व्यवासायीले पनि केही व्यहोर्नु पर्छ।
लकडाउन भएकोले व्यापार चौपट भयो भनेर कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमीक नै दिन रोक्न भने हुँदैन। सरकारले पनि लकडाउनको अवधिमातलबसहितको विदा दिनुस् भनेर आह्वन गर्नुपर्छ किनकी कोरोना लागेको व्यक्ति कार्यालय आएर काम गरेमा उसले अरुलाई पनि सार्नसक्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने क्षति ठूलो हुन्छ। कुनै कुनै अवस्थामा कुनैपनि उद्योग बन्द भएमा कामदारलाई राहत दिनुपर्छ। त्यसका लागिहाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष नै छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जसले योगदान गरेको छ, त्यसको लागि कोषले केही गर्ला। बाँकीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अरुथप सोच्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन तर सरकारले यसको असर कहाँसम्म पर्छ भनेर गम्भीर अध्ययन भने गर्नुपर्छ।
कोरोनाको कारण बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली सैग मेडिकल र मेनपावर ब्यबसाय ध्वस्त हुने अवस्था छ, उद्योग व्यवसाय चौपट हुनेअवस्था छ, हजारौले रोजगारी गुमाउनेछन् यस्तो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई राहत स्वरुप ऋण पुनर्तालिकीकरण र कर तिर्ने समयबढाउँदा पुग्ला ?
हामीले दुई वटा ठूला समस्या भोग्यौं भूकम्प र नाकाबन्दी। दुवै बेला पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव परेको हो। त्यतिवेला पनिपर्यटकको संख्या ३२ देखि ३३ प्रतिशतले घटेको थियो। पछि पुनः रिकभर भयो।
यदि कोरोनाको सन्त्रास असारसम्ममा कम भएमा दशैसम्ममा पर्यटन क्षेत्रले पनि रिकभर गर्दछ। असारसम्म पनि भएन भने थप एक बर्षसमस्या पर्छ। उद्योगहरुको हकमा पनि त्यही हो। कोरोनाको कारण रोजगार गुमाएकाहरुको हकमा भने सरकारले केही राहत दिनुपर्छ।रोजगार गुमाएकाहरुलाई वैकल्पिक रोजगारीको प्रबन्ध पनि गर्न सकिन्छ।
हुन त सरकारसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ। यदि त्यता रोजगार गुमाएकालाई यता काम लगाउने वा सो कार्यक्रमबाट नै रकमजाने गरी निजी क्षेत्रको काम पनि लगाउन सकिन्छ। भइरहेको कार्यक्रलाई नै मोबिलाइज गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डलर बलियो होइन। मानिसले सुरक्षित सम्पत्तिमा लगानी गर्छ। सुरक्षित लगानी भनेको कि सुन कि अत्यन्तविश्वसनीय मुद्रालाई मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जापानी यानको मूल्य र सुनको मूल्य बढेको हुनाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभावदेखिएको हो।
नेपालमा डलर बढ्नु भनेको नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग भएकोले हो। यतिवेला भारतीय अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, डलरसँगभारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालको मुद्रा पनि कमजोर भएको हो। तर विश्व बजारमा धेरै मानिसहरु जापानी यानमा लगानी गर्नथालेका छन्।
कोरोनाको कारणले तपाइको ब्यबसायलाई चाही कस्तो असर गरेको छ ?
हाम्रो व्यापार घटिरहेको छ तर भाडा भने घटेको छैन। स्टाफहरु पनि धेरै छन्। यसको प्रभाव त धेरै परेको छ।’ उनका अनुसार पहिलेदिनको दुई सय जाना मानिस बैदेशिक रोजगारका लागी मेडिकल हुन्थयो भने अहिले ठप छ। त्यो लगायत नेपालबाट हुने निर्यात पनीशून्य छ यसको स्थिति भयबह छ ।